Xiaomi Mi MIX 3 5G: Nkọwa, ọnụahịa na igba egbe | Gam akporosis
Xiaomi Mi MIX 3 5G: Ekwentị 5G mbụ nke Xiaomi bụ onye ọrụ gọọmentị ma anyị nwalere gị ya
Xiaomi bụ otu n’ime ndị protagonists na Sọnde a na MWC 2019. Ebe ọ bụ na akara ahụ mechara hapụ anyị ekwentị mbụ ya na 5G. Dịka ị maraworị ọnwa ole na ole gara aga, Ọ bụ ụdị pụrụ iche nke Mi MIX 3. A na-atụ anya na ihe nlere a ga-abịarute ihe omume na Barcelona, ​​ihe mechara mee. Xiaomi Mi MIX 3 5G bụ ọkwa ugbu a.
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, emeela ọtụtụ mgbanwe na ngwaọrụ ahụ. Mgbanwe mbu, ikekwe nke kachasị mkpa, bu na Xiaomi Mi MIX 3 5G a biara na Snapdragon 855, ihe nhazi kacha ike na ahịa, ya mere o nwere nkwado a maka 5G. Anyị na-agwa gị n'okpuru.
Banyere imewe, ọ na-ejigide njirimara na anyị enwewo ike ịhụ na ụdị izizi. Ya mere anyị na-ahụ seramiiki imechaNa mgbakwunye na ụdị mmịfe ahụ, nke dọtara uche dị ukwuu mgbe etolitere ya na ọdịda ikpeazụ. Ọ bụ ezie na n'ime ya anyị hụrụ mgbanwe ndị a.
Ihe ndị a bụ mgbanwe ndị mere ka o kwe omume Xiaomi Mi MIX 3 5G bu ama mbu nke akara ndị China iji kwado 5G. Na mgbakwunye na otu n'ime ndị mbụ na ahịa na-ukara.
1 Nkọwapụta Xiaomi Mi MIX 3 5G
Nkọwapụta Xiaomi Mi MIX 3 5G
N'okpuru ị nwere ike ịhụ nkọwapụta zuru oke nke njedebe a dị elu nke akara ndị China. Dịka anyị kwurula, anyị na-ahụ mgbanwe ole na ole ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. Naanị na nke a, anyị na-ahụ ihe nhazi na modem bụ ihe na-eme ka o kwe omume ngwaọrụ a nwere ndakọrịta 5G.
Nkọwapụta teknụzụ Xiaomi Mi MIX 3 5G
Nlereanya Mi Mix 3G
Usoro njikwa Gam akporo 8.1 Oreo ya na MIUI 10
Ihuenyo 6.39-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi 1080 x 2340 pikselụ na ọnụọgụ 19 5: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 855 octa-isi
Nchekwa n'ime 64 / 128 / 256 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 12 + 12 MP nwere oghere f / 1.8 na f / 2.4 na ikanam Flash
Igwe n'ihu 24 +2 MP nwere oghere f / 1.8
Njikọ 5G Dual SIM Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac USB-Type C
Atụmatụ ndị ọzọ Naghachi NFC mkpisiaka ihe mmetụta 3n 3D ihu face kpọghee ekwt
Batrị 3.800 mAh na ntinye ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Ahịa 599 euro
Otu n'ime mgbanwe ndị anyị na-ahụ na ụdị ahụ bụ ọnụnọ nke nhọrọ nchekwa ndị ọzọ. Ngwaọrụ ahụ enweworị ụdị atọ maka RAM, ebe ọ bụ na ọ bụ onye mbụ nke ndị China na-abịa RAM 10 GB. Na nsụgharị a na 5G anyị na-ahụ ọzọ ụdị atọ nke RAM. Ọzọkwa atọ nhọrọ na okwu nke nchekwa, 64/128 ma ọ bụ 256 GB ikike. Nke mere na onye ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ onye suut ya mma.
Ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike ịhụ na enweghị mgbanwe ọ bụla na Xiaomi Mi MIX 3 5G a. Ngwaọrụ ahụ na-ejigide nkọwa mbụ ya. Otu akụkụ nke nwere ike iwute ọtụtụ bụ sistemụ arụmọrụ. Ebe ọ bụ na ngwaọrụ ọ ka na-eji gam akporo 8.1 Oreo. A na-atụ anya na ọ ga-abịa na gam akporo, ma ugbu a ị ga-echere ruo mgbe ị ga-enweta mmelite ahụ na eze. Anyị amaghị mgbe nke a ga-eme, eleghi anya na nkeji nke abụọ nke afọ.
Xiaomi ekwenyela na a gha abanye oru a n'uwa. Ha ekwuola na ọ ga-abịarute Yurop n’oge na-adịghị anya, ọ bụ ezie na ugbu a ha enyebeghị ụbọchị ọ bụla maka ya. Ya mere, anyị ga-echere maka ozi ndị ọzọ n'izu ndị a. Ihe anyị nwere ugbu a bụ ego mbido ngwaọrụ a.
Dịka anyị kwurula, anyị na-ahụ ọtụtụ nsụgharị nke Xiaomi Mi MIX 3 5G. Ndị dị ọnụ ala karịa ndị a bụ ụdị nke nwere 6 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa dị n’ime. N'okwu a, Versiondị a ga-enwe ọnụahịa nke euro 599, dị ka ụlọ ọrụ n'onwe ya kwadoro. Anyị amaghị ihe ahịa ndị ọzọ nke nsụgharị nke ngwaọrụ ga-enwe. Mana anyi nwere olile anya inweta onu ahia ndia n’adighi anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi MIX 3 5G: Ekwentị 5G mbụ nke Xiaomi bụ onye ọrụ gọọmentị ma anyị nwalere gị ya
Foto ndị gosipụtara ngosipụta 10X nke Huawei P30 Pro bịara ìhè
OUKITEL weputara igwe ohuru ya na MWC